Localist: Kwusaanụ, Jikwaa ma Kwalite ihe omume gị n'ịntanetị | Martech Zone
Tuesday, February 7, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa na-eji ihe omume eme ihe karịa oge ọ bụla, na mmetụta ya doro anya. N'ezie, ndị na-ere ahịa na-ebugharị ahịa ahịa na ihe omume dị ka usoro nke abụọ ha kachasị arụ ọrụ mgbe ihe omume ụlọ ọrụ ahụ mechara Ihe omume na-enyere aka iweta ndu ọhụụ, gbanwee atụmanya nwere mmasị na ndị ahịa, ma kọwaa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na ezigbo oge. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị na - ere ahịa na - agbasi mbọ ike ọ bụghị naanị ime ka mmemme dị na ike jikọtara ọnụ, kamakwa ịghọta na ịlele etu ha si anya ahịa, mmata akara, njikọ aka, na ndị ọzọ. N'ihi ya, ihe na-anọchi anya otu ụdị Wild West maka ndị ahịa.
Ihe ndị a na-aga na-eme kwa afọ maka ọtụtụ na teknụzụ, site na Salesforce's DreamForce ogbako ka Ihe ngosi eletrọniki nke mba ụwa (CES). Ha na-ewu ewu na ahia (chee MozCon na Inbound nke Hubspot nzukọ). Dị dị ka Pepsi na Prudential ndị ọbịa na-eme ihe iji jikọta ndị miri emi na ndị ahịa ma mepụta mmata mara mma. Dịka ọmụmaatụ, 4.01K nke Prudential "Ọsọ maka ezumike nká" bidoro dị ka onye ahịa na-eche ihe omume na-agba ọsọ ọsọ wee tolite ngwa ahịa mgbasa ozi maka ụlọ ọrụ ahụ n'ihi ọganiihu ya. Mgbe ahụ enwere ihe ndị dịka South by Southwest (SXSW), nke na-eweta ụdị, ndị ahịa, na ndị na-eme egwuregwu ọnụ.
Y’oburu n’inweta ahia, o yikariri ka inwee mmefu ego maka ihe omume - ya na ezigbo ihe kpatara ya. Pasent iri itoolu na isii nke ndị na-azụ ahịa bụ ndị nwere nnukwu ahụmịhe na mmemme ga-enwekarị ọchịchọ ịzụta ihe omume nke taa abụghị naanị izukọta, ka osila dị; ha bụ ọkaibe shindigs na incredibly mgbagwoju ahịa ahịa. Ndị na-ere ahịa na-etinye ihe niile site na Near Field Communications (NFCs) na Radio-Frequency Identification (RFIDs), na-eji teknụzụ ndị a na-egbutu egwu iji soro, ọdịdị ìgwè mmadụ, ma melite ihe omume ha n'akụkụ niile na usoro ndụ ahụ.
Mana kedu ka ụlọ ọrụ dị iche iche si agbasa ozi banyere ihe omume ha? Ihe omume nwere ike bipụtara na weebụsaịtị ụlọ ọrụ, mgbasa ozi mmekọrịta, site na email, ma ọ bụ n'ọtụtụ usoro ndị ọzọ. Onye ọ bụla n’ime ihe ntanetị ndị a nwere uru na ọghọm ya, mana ọ na-adị ka enwere ihe kọrọ. Ọ bụrụ na ọ dị otu ebe ndị ahịa nwere ike ịga iji kwalite ihe omume ha niile na ntanetị? Enwere - akpọrọ ya kalenda mmemme.
Mgbe ị nụrụ kalenda mmemme, ị nwere ike ị na-eche nke kalenda ekwentị dị mfe 30 ụbọchị. Ọ na-enye nkọwa na ozi banyere ihe omume na-adịghị na ụzọ ị ga-adọrọ ndị mmadụ kalenda gị iji mụtakwuo banyere ha. Agbanyeghị, kalenda mmemme mmemme taa bụ ngwa ahịa dị ike nke na-enyere aka ịchụpụ njem, ịbịa, na ịmara maka mmemme gị. Banye Onye obodo, BFF ọhụrụ gị.
Kalenda mmemme mmekọrịta nke ndị obodo bụ otu ụlọ ahịa na-enyere ndị na-ere ahịa aka ibipụta, jikwaa ma kwalite mmemme ha n'ịntanetị, niile n'otu ebe. Onye obodo awade ọhụrụ atụmatụ, gụnyere:
Ndị mmadụ ọdịda peeji nke maka ihe omume ọ bụla, ọnọdụ, na otu agbalite peeji peeji ma melite njikarịcha Ngini Nchọpụta (SEO).
Mmekọrịta na nyiwe mmekọrịta dị ka Facebook na Twitter, nke na-enye ndị admins ohere ịme mkparịta ụka nke mmemme ha ma nye ndị na-ege ntị ohere ịkekọrịta atụmatụ mmemme ha na ndị enyi.
Nchịkọta ihe omume na njedebes, nke na-enyere ndị admins aka ịgbaso usoro ịbịa, na-edobe taabụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na nlele mmeghachi omume nke ndị na-ege ntị tupu ihe omume.
Ngwaahia mbọn, nke na-enye gị ohere itinye ụdị akara na akara gị nke ọma, na-edebe akara gị n'ihu na etiti.
API dị ike, nke jikọtara na teknụzụ mmemme dị iche iche iji jikọta ahụmịhe mmemme gị.
Localist dozie nsogbu nke jirichaa nloghachi gị na ihe omume site na-ekewapụrụ iche ihe omume nke mmadụ nwere ike iji na-azụ ahịa ihe omume gị, ma ọ bụ site na nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ahịa ọdịnaya, ma ọ bụ ọwa ahịa ọzọ.
Site na mpempe akwụkwọ ọdịda nke onye ọ bụla maka omume ọ bụla, ọnọdụ, na otu, Localist na-emepụta ọdịnaya SEO nwere ihu ọma nwere ike weghachite maka ire ahịa na ntanetị gị niile. Na-amarịrị mgbalị nke ịmepụta ọdịnaya niile ịchọrọ iji biputere ihe omume gị; gịnị kpatara ya ga-eji nọrọ ọdụ na webpage mgbe ị nwere ike iji otu ozi ahụ wee nweta ndị bịara ọhụrụ na ọbụlagodi ndị ahịa?
Teknụzụ ndị obodo nwere na - enyere ndị na - azụ ahịa aka iji ihe omume ha mee ihe bara uru, na - eji kalenda dị ka igwe na - ere ngwa ahịa siri ike. Ibe ya SEO-enyi na enyi, ahaziri ahaziri, na njedebe nchịkọta nye gị ngwa ọrụ ịchọrọ iji akara na mmemme gị, ha niile nọ n'otu ebe, yana interface dị mfe iji.
Iji mụtakwuo ma nwalee Localist maka onwe gị, gaa na Localist.com wee bido ikpe ikpe n'efu taa.
Bido Nnwale Ọnọdụ Obodo Gị Free
Tags: CESmmemme ahiainboundinbound ogbakoihe eji eme ihe elektrọnik nke mba ụwaonye nwe obodoMgbakọ Ahịamozconkwalite ihe omume n'ịntanetịndị na -ere ahịa nrọndịda site na ndịda ọdịda anyanwụsxsw